काठमाडौंमा आफ्नै छोराबाट मारिए गुण्डा ! - Enepalese.com
काठमाडौंमा आफ्नै छोराबाट मारिए गुण्डा !
इनेप्लिज २०७२ चैत १८ गते १३:१२ मा प्रकाशित
काठमाडौं, १८ चैत । राजधानीमा एक युवकले आफ्नै बाबुको हत्या गरेका छन् । काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका-१ गागल फेंदी बस्ने २८ वर्षीय अर्जुन लामालाई बाबुको हत्याको अभियोगमा बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षले जनाएको छ । अर्जुनले आफ्ना ५३ वर्षीय बाबु गुण्डा लामालाई घरमा खाना खाने विषयमा विवाद हुँदा भारी बोक्ने नाम्लोले हिर्काउँदा आँगनमा लडेर गम्भिर घाईते भएकोले पिपुल्स लाईफ केयर अस्पताल साँखु पठाएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । यसैगरी मकवानपुर हाँडीखोला–६ घर भई ललितपुर उपमहानगरपालिका–२७ सुनाकोठी बस्ने ५५ वर्षीय जयबहादुर घिसिङ बुधबार मृत फेला परेका छन् । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।